Sezvo iwe uchitarisa uye kufamba-famba uchitenderera internet, iwe unoshanyira kumhara mapeji nguva dzese.
A kumhara peji inogona kunge iri peji rakatarwa iwe raunotorwa kana ukabaya kushambadziro. Iyo inogona zvakare iri iro peji rinotevera yekufona-kune-chiito bhatani kana kushanda seyakavanzika peji rewebhusaiti.
Zvisinei nekuti iwe "unosvika sei" pane peji rekumhara, chinangwa chayo ndechekukurudzira iwe kuti utendeukire kumutungamiriri kana mutengi. Nechikonzero ichocho, mapeji ekumhara akasarudzika zvine simba zvikamu zvebhizinesi reshambadziro yedhijitari zano.
Chii chinonzi peji rekumhara?
Peji rekumhara peji rewebhusaiti rine chinangwa chairo - chinangwa chepeji rekumisikidza kushandura vashanyi kuita zvinotungamira. Kunyange paine zvakawanda mhando dzemapeji ekumhara iyo chinangwa zvakafanana - tora zvakawanda zvinotungamira.
Mapeji ekumhara ane mafomu anotungamira ayo anokumbira vashanyi ruzivo rwavo rwekutaurirana mukutsinhana nechimwe chinhu chakakosha, zvimwe chinozivikanwa sekupihwa.
Vhidhiyo iri pazasi ichabatsira kutyaira iyo dudziro kumba.
Zvino, funga nezvekuti unodzivirira sei ruzivo rwako. Chii chingaite kuti munhu ade kusiya ruzivo rwavo rwekufambidzana neinternet?
Eya, ndipo panosvika peji yekumira yakanakisa miitiro inouya. Iyo yakanangwa, yakanyatsogadzirwa peji yekumhara ine yakasimba fomati uye inonzwika kopi inowana chero chero munhu kuti ape ruzivo rwavo.
Kutanga, nei uchida peji rekumhara?
Sei iwe uchigadzira iyo yakakosha peji rekuti vanhu vazadze fomu? Nei usingangoshandisa peji rako rekutanga kana nezve peji? Mibvunzo mikuru.
Mushure mekuverenga chinyorwa ichi, ungangokwanisa kupindura iyo mibvunzo iwe pachako, asi mhinduro pfupi ndeiyi: Peji rinomhara rinobvisa zvinovhiringidza nekubvisa kufamba, zvinokwikwidza zvinongedzo, uye dzimwe sarudzo kuitira kuti utore kutarisisa kwemushanyi wako. Uye kutarisisa kwakazara kunoreva kuti iwe unogona kutungamira mushanyi wako kwaungade kuti vaende, kureva, kune yako inotungamira fomu. Muchidimbu, mapeji ekumhara ari chaizvo yakagadzirirwa kugadzira shanduko.
Izvozvi kuti iwe unzwisise kukosha kwavo, ngativhurei kumhara peji peji maitiro akanakisa kuve nechokwadi kuti ako mapeji akagadzwa kuti achinje.
Zvakanga zvakawanda here? Tichatsemura aya ekumhara peji akanyanya maitiro pazasi.
1. Nyora musoro wakanangana nebatsiro.
Kune vese vanhu gumi vanoshanyira peji rako rekumhara, zvirinani nomwe vavo vachadaro Bounce off peji. Kuchengeta iyo nhamba yakaderera, vashanyi vako vanofanirwa kuziva (uye kunzwisisa) zviri mazviri kwavari mukati memasekondi ekusvika. Musoro wako wenyaya ndicho chinhu chekutanga chavachaverenga, uye chinofanirwa kujekesa uye muchidimbu kukosha kweiyo peji rako rekumisikidza uye kupa.
2. Sarudza chifananidzo chinoratidza kupihwa kwacho.
Ehe, chifananidzo chinosungirwa, uye chinofanira kumiririra vateereri vako. Chinangwa chemufananidzo wako ndechekuburitsa manzwiro - zvinofanirwa kuratidza kuti mushanyi wako achanzwa sei kana vagamuchira chako. Mimwe mifananidzo inogona kushanda zvirinani pane mimwe, saka unofanirwa kugara uchipatsanura bvunzo zvaunogona (izvo zvatinozofukidza pazasi).
3. Nyora unogombedzera kopi.
Usapedza nguva yese iyoyo uchigadzira iwo musoro wenyaya wakakwana uye uchitsvaga yako yakanaka mufananidzo kuti igwadame kana zvasvika pamashoko anozotengesa yako yekufona-ku-chiito. Kopi yako inoda kuve yakajeka, yakapfupika uye inofanirwa kutungamira mushanyi wako kune zvaunoda kuti vapedze. Kopi inomanikidza inotaura zvakare yakanangana nemushanyi nekushandisa "iwe" uye "wako" kuti vanzwe kubatikana. Tichaenda zvakadzama pane matipi emakopi pazasi.
4. Sanganisira fomu inotungamira pamusoro pechipfuva.
Yako fomu yekutungamira inoda kuve nyore kuwanikwa kana yako tarisiro ichida kushandura ipapo - iwe zvechokwadi haudi kuti vatsvage uye vaongorore peji rako rekumhara kuti vawane chako kupihwa. "Pamusoro pechipfuva" ​​zvinongoreva kuti vashanyi havafanirwe kupuruzira kuti vasvike pafomu - kuti iri mukutarisa nekukurumidza kana mumwe munhu abaya peji. Iyi inogona kunge iri fomu kana chinongedzo chinotsigira fomu. Kunyangwe zvirinani: Dhizaini fomu yako yekupuruzira nemushandisi pavanenge vachifamba pasi iro peji.
5. Wedzera yakajeka uye yakamira yekufona-ku-chiito.
Iko kushevedza-kuita-chiito (CTA) zviri kupokana ndicho chinhu chakakosha pane peji rako rekumhara - ndechimwe chezvinhu zvakawanda zvinokurudzira kutendeuka. Bhatani reCTA rinoda kumira, zvichireva kuti iwe unofanirwa kushandisa kara inopesana nezvimwe zvinhu zviri papeji. Buda pachena nezve izvo iwe zvaunoda kuti vashanyi vaite, ndiko kuti, shandisa chiito chiito icho chinochitsanangurira ivo, senge "kuendesa", "kurodha pasi", kana "kuzviwana izvozvi". Zvimwe pane CTA maitiro akanakisa pazasi.
6. Ipa chipo chakakodzera.
Funga nezve peji rako rekumhara sechikamu cherwendo rwako rwekutungamira kune chako chekupedzisira chinopihwa - chako chigadzirwa kana sevhisi, ndiko kuti. Chipo chako ndicho chinhu chaunopa mukutsinhana neruzivo rwako rwevatungamiriri. Kwete chete iyo inofanirwa kunge ichimanikidza zvakakwana kuti mushanyi wako ape ruzivo rwavo rwekuonana, asi zvakare inofanirwa kuve inoenderana nebhizinesi rako. Iti iwe unotengesa mabhiza emabhiza.
Chipo chako chingave chinhu chakadai se "10 Nyore Nzira dzekukudza Hove dzako dzeBhiza," nekuti, pakupedzisira, iwe uchazobvunza izvo zvinotungamira kutenga mabhiza ako. Iwe haungavareverere nechipo nezve kurima kwehupenyu nekuti izvo zvinovaisa munzira yakasiyana zvachose. Tichataura zvakawanda nezve kumanikidza kupihwa kupihwa pazasi.
7. Ingobvunza zvaunoda.
Iwe unoda kuunganidza ruzivo rwakawanda sezvazvinogona pamusoro pekutungamira kwako, asi zvakadii zvaunokumbira zvinoenderana nezvinhu zvinoverengeka: vanozivana newe zvakadii, ivo varipi murwendo rwevatengi vavo, uye kuti vanovimba zvakadii newe. Kumbira ruzivo rudiki sezvaunoda mufomu yako yekutungamira kuti ugadzire yakadzika chipingamupinyi pakupinda. Iro zita uye email zvinopfuura zvakaringana kusimudzira hutungamiriri hutsva.
8. Bvisa kufamba kwese.
Peji rako rekumhara rine chinangwa chimwe uye chinangwa chimwe chete: kushandura vashanyi kuita zvinotungamira. Chero zvinokwikwidza zvinongedzo - zvinosanganisira zvemukati zvinongedzo kune mamwe mapeji pawebhusaiti yako - zvinokanganisa kubva kune icho chinangwa. Bvisa chero humwe hunongedzo pane peji rako kudhiza vese vashanyi vako kutarisisa kune yako yekufona-kune-chiito.
Ita kuti peji rako riite.
Kungofanana nemamwe mapeji ese pawebhusaiti yako, ako mapeji ekumhara anoda kuve anoteerera kuti agone zvese zvinoonekwa. Chinhu chekupedzisira chaunoda ndechekuti fomu rako rive rinowira pasi pakuonekwa pane nhare mbozha. Ipa vashanyi vako mukana wese unokwanisika wekushandura, zvisinei nekuti vari kuona sei peji rako.
Unogona kushandisa maturusi kubatsira kuita izvi. Semuenzaniso, HubSpot yekudhonza-uye-kudonhedza kumhara peji mupepeti, inowanikwa mu Kushambadzira Hub Kutanga, zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti ugadzire mafoni akagadziriswa mapeji ekumhara uye mafomu zvisina basa.
10. Gadzirira kutsvaga.
Chokwadi, iwe unenge uchityaira vashanyi kune yako peji yekumhara kuburikidza neemail blast, zvemagariro zvinyorwa uye dzimwe nzira dzekutengesa, asi peji rako rinofanira zvakare kugadziridzwa nemataipi akakosha mazwi kune ako akabhadharwa macampaign uye organic search. Kana mumwe munhu akatsvaga mutsara wako wakakosha, ivo vanofanirwa kuwana yako yekumhara peji. Saizvozvo, kana iwe ukanangisa iro kiyi kiyi ine yakabhadharwa ads, iwo mazwi anofanirwa kuve aripo pane yako yekumhara peji.
11. Rangarira kushandisa peji rekutenda.
Peji rekutenda ndipo paunotumira zvinotungamira kana vachinge vapedza fomu rako. Zvino, unogona kungoratidza yekutenda meseji pane iro peji kana dhongi rekutenda zvachose, asi kune zvikonzero zvakawanda nei isiri iyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Peji yekutenda inoshanda zvinangwa zvitatu zvakakosha:
Inoendesa iko kupihwa kwawakavimbisa (kazhinji muchimiro chekukanganwa chiriporipocho)
Iyo inokupa iwe mukana wekufarira yako nyowani kutungamira mune zvimwe zvinowirirana zvirimo zvemukati
Inoshanda semukana wekuvatenda nezvavanofarira, izvo zvinoenda kure kure mukuvasimudzira kumutengi pasi pemutsara.
Maitiro Ekugadzira Yako Inosvika Peji
Kazhinji nguva, dhizaini inoreva kugona, mavara, uye mifananidzo yakanaka. Nechinangwa chepeji rekumhara, isu tinotora dhizaini nhanho inoenderera kureva kunoshanda, kutungamira-kutungamira, uye kunoshanda. Nekudaro, kuti ugadzire rakarongedzwa-zvakanaka peji rekumhara, iwe unofanirwa kupinza mukati mese kuruboshwe uye kuruboshwe kuropi. Asi usandibata zvisiri izvo - iwe uchiri kuda mifananidzo yakanaka uye inokwezva mavara kuti uchinje vashanyi vako. Tichabata maitiro ekuisa zvese izvi pazasi.
Kumhara Peji Chiumbwa
Nhau dzakanaka iwe haudi kuti uwane zvakare kugadzira pano. Mazhinji mapeji ekumhara anotevera akafanana akafanana mamiriro nekuti zvakaratidzirwa kuti zvinoshanda. Iwe unogona kusimbisa kugona kwako kuburikidza nezvakanyorwa zvinhu uye mifananidzo, asi namatira kune kumhara peji fomati kuti vanhu vajaira kuona.
Peji rakanaka rekumhara rine zvishanu zvinhu (tarisa iwo muenzaniso wekumhara peji pazasi kuti uone izvi zvinhu muchiita):
Musoro izvo zvinokwezva vashanyi kutarisisa
Mufananidzo wakakodzera izvo zvinoenderana nevateereri vako
Mutungamiri fomu iyo inogara pamusoro pechipfuva kutora ruzivo rwevaenzi
CTA izvo zvinotarisisa zviito uye zvinomanikidza
Kopa uye tsananguro iyo inozivisa uye inokwezva mushanyi wako kuti apedze fomu rako
Inogona yako peji yekumhara inogona kusanganisira zvinopfuura izvi? Ndizvozvo. (Funga zvemagariro zvekugovana mabhatani izvo vashanyi vanogona kushandisa kuparadzira iro izwi nezve yako yekupa). Izvi zvinongova zvishoma zviripo. Iwe unofanirwa kuziva vateereri vako, kwavari kubva uye kwavari parwendo rwevatengi vavo kuti vazive kuti yakawanda sei yaunoda kuisa. Mutemo wechigunwe kusanganisa ruzivo rwakawanda sezvaunoda kuti vanhu vatendeuke.
Kumhara Peji Kurongwa
Izvi zvinogona kuuya sekushamisika, asi vanhu vazhinji havaverenge ese mazwi eako akachenjera-akagadzirwa kopi. Panzvimbo iyoyo, ivo vanodarika nepakati uye voburitsa yakanyanya kukosha tidbits. Basa rako ndere kuita kuti zvidimbu izvi zvimire pachena kuti mushanyi wako asarasikirwa nechinhu chakakosha.
Izvi zvinoreva zvinhu zvishoma…
Chengetedza zvakanyanya ruzivo rwakakosha pamusoro peta saka mushanyi wako haadi kupururudza kuti asvike pairi.
Ita a blink test pane peji rako, zvichireva kuti mushanyi anofanira kukwanisa kuunganidza meseji huru munguva shoma pane inotora iwo kuti vheneke, kureva, isingasviki masekondi mashanu.
shandisa chena (kana isina kunaka) nzvimbo kuchengetedza mushanyi wako kubatikana, akatarisa, uye kuvabatsira kuti vanzwisise meseji yako.
Nyora nemabara uye ndima pfupi kuita kuti kopi yako ive nyore kugaya.
Edza kudaro shanda iyo yakakosha kopi mu F-pateni, Ndiro rairo rinotariswa nevanhu vazhinji peji online. Shanda nekuyerera kwemaitiro ekuona kuendesa vanhu kunzvimbo dzakakosha dzinovaita kuti vatendeuke.
Kumhara Peji Rudzi
Iyo dhizaini peji rako rekumhara - kusanganisira iwo mavara aunoshandisa - anofanirwa kuratidza izvo zvewebsite yako. Uri kuronga kuumba hukama hwakareba nevanhu vanoshanyira peji rako rekumhara, uye zvinoreva kuti vanofanirwa kujairana nemavara ako ekumaka uye yakasarudzika dhizaini. Kunyanya pavanoziva yako mhando, pavanonyanya kuvimba newe (uye pavanonyanya kuvimba newe, zvinova nyore kuwana kuti vaite izvo zvaunoda kuti vaite).
Idzo nzvimbo dzaunofanirwa kufunga kushandisa mamwe mavara ari pazvinhu zve peji rako zvinoda kumira - ahem, yako CTA bhatani. Musiyano ndiro zita remutambo pano. Iti mavara ako ane mavara akanyanya kuve girini… iwe uchazoda kusarudza vara rinogona kukwezva vashandisi kutarisisa, taura pepuru.
Kufungisisa kuti ndeapi mavara anoita mushe? Takaita katsvagiridzo kuti uone ayo mavara anoshandura zvakanakisa.
Kumhara Peji Mifananidzo
Mufananidzo uri papeji rako rekumhara ndechimwe chinhu chekutanga chinoonekwa nevanhu, uye sezvo vanhu vachigadzirisa zvinoonekwa nekukurumidza kupfuura zvavano tumira mameseji, inoisa toni kune yavo yese ruzivo. Asi iwe unogona sei kusarudza pakati pemamirioni emastock mapikicha uye iyo kambani pikicha pikicha iyo iri kutora iyo yese nzvimbo pakombuta yako?
Ngatideredzei sarudzo nemibvunzo mishoma yakakosha:
Ndivanaani vateereri vangu?
Chii chako chimiro chinoita senge? Vane makore mangani? Vanopfeka sei? Chii chavanofarira? Mhinduro dzemibvunzo iyi dzakakosha mukusarudza kuti ndeupi mufananidzo wauri kuisa kumberi nepakati pane peji rako rekumhara. Kana ichizokwidza vateereri vako, saka inoda kuvamiririra neimwe nzira.
Ndepapi pane yangu peji yekumhara yandinoda kuti vatarise?
Izvi zvinogona kutaridza semubvunzo usinganzwisisike, asi chaizvo zvinoenderana nepfungwa yekuti vanhu vanoteedzera zvinongedzo, senge panotarisa mumwe munhu kana kunongedza. Kana iwe uchida kuti vashanyi vazadze fomu, funga nezve chifananidzo chinotungamira kutarisa kwavo kune iyo fomu.
Mufananidzo uyu uchasimbisa meseji yangu here?
Chinhu chega chega pane peji rako rekumhara chinoshanda chakakosha chinangwa. Sezvo chifananidzo chako chiri chimwe chezvinhu zvekutanga zvinoonekwa nevanhu, zvinofanirwa kubatsira kujekesa izvo mushanyi angatarisira kubva papeji rako. Ita shuwa kuti yako mufananidzo inowedzera kukosha.
Heano zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvekutarisa kana uchigadzira mifananidzo mikuru yekumhara peji.
Takakurukura CTA yako kakati wandei kusvika parizvino, asi sezvo iri chikamu chakakosha pane peji rako rekumhara, zvakakodzera kutaura zvakare. Kana zvasvika pamasikirwo eCTA yako, pane zvidimbu zvidiki zvinoita kuti ikwezve zvekuti vashanyi vanonzwa vachimanikidzwa kubaya. Kujekesa, CTA yako inosanganisira bhatani uye kopi yaunoshandisa kukwevera kwairi; aya matipi anovhara ese ari maviri.
Ipa yako CTA yakajeka uye inopesana nemuvara
Tarisa yako CTA kopi pane iyo bhenefiti kune wako mushanyi
Enda kune iyo poindi - edza kushandisa asingasviki mashanu mazwi
Udza mushanyi wako zvaunoda kuti vaite vachishandisa zviito zvekuita, semuenzaniso Tora, Dhawunirodha, Dzvanya
Gadzira bhatani rako rakakura zvakakwana kuti ubude pane peji
Ipa imwe nzvimbo isina kunaka - usamanikidza nzvimbo yakatenderedza CTA yako
Tevedza kuyerera kweiyo peji uye isa CTA yako uko maziso evaverengi vako achaenda, senge kurudyi kana pazasi pekopi
Edza bhatani rako chimiro, edza kopi yako… senge chokwadi chekuyedza zvese (isu tichavhara maitiro ekuzviita izvi pazasi)
Mobile Yekumhara Peji
Kupfuura hafu yewebsite traffic inouya kubva kune nhare mbozha, nekudaro, ruzivo rwevashandisi runofanirwa kunge rwakafanana zvisinei nekuti vashanyi vechigadzirwa vari kushandisa. Nekuita yako peji yekumhara inoteerera, iwe unovapa iwo wese mukana wekutarisa uye kushandura, kunyangwe vari pakombuta, foni, piritsi, kana zvimwewo.
Kumhara Peji Kuteedzera Matipi
Mushure mekugadzirwa kunouya kopi yakanaka. Chinangwa chako ndechekumanikidza, kuraira, kudiwa, kupfupika, kushanda, kuvimbika uye kudzidzisa zvese kamwechete. Akazviita sei? Ramba uchiverenga.
1. Vhara pfungwa huru.
Hazvina mhosva kuti iwe unozviisa sei, pane mashoma mashoma mapoinzi aunofanirwa kurova nekopi yako. Iwo akakosha mapoinzi ipfungwa yemunhu wekurwadziwa, mhinduro kune iyo marwadzo poindi, mhinduro yako inoshanda sei (maficha), kuti mhinduro yako ichagadzirisa sei mamiriro avo (mabhenefiti), uye kuongorora kuti inoshanda (humbowo hwemagariro).
Ruzhinji rwezvaunonyora zvinoda kugadzirisa kuti ungabatsira sei tarisiro yako, kwete kuti unotyisa sei (nekuti zvinorehwa). Ngatiendei zvakadzama pane aya mapoinzi.
Iyo Pain Point
Iyo poindi yekurwadziwa iyo iwe yaunotarisa pairi inofanirwa kuve iyo iyo yako kupihwa inogadzirisa. Kwete kurira zvisina kunaka, asi zvakakosha kuti ubate padambudziko rinotarisana newe kuti vazive kuti unonzwisisa zvavari kusangana nazvo. Tsitsi inzira inoshanda yekuvaka kuvimba. Uye kana ivo vachiziva kuti iwe unowana dambudziko ravo, saka vangangodaro kuvimba nemhinduro yako.
Mhinduro kune yavo yekurwadziwa poindi ndiyo yauri kupa mukutsinhana neruzivo rwavo. Enzanisira nzira yakajeka pakati pechinetso chavo uye kuti mhinduro yako imushonga wavanoda.
Kungoziva mhinduro yako kunogona kunge kusingakwanise kushandura zvinotungamira, saka unofanirwa kutaura izvo zvinosanganisirwa mune iyo mhinduro. Kana iri ebook, ndedzipi zvidzidzo zvaunovhara? Kana iwe uri kusimudzira webinar, ichashanda sei uye iwe unodzidzisei? Kana chiri sevhisi, chii chavanogona kutarisira? Ipa zvaunogona kutungamira ruzivo rwese rwavanoda kuti vatore danho.
Kopi yako inofanirwa kuremerwa nezvibatsiro kumushandisi nekuti ndizvo zvavanonyanya kufarira - zviri mazviri kwavari. Nepo maficha achinyora izvo zvaunopa, mabhenefiti anotaurira vashanyi maringe nemamiriro avo ekuvandudza. Inopa mufananidzo wakajeka wekuti hupenyu hwavo hunogona kuve nani nekushandisa mhinduro yako.
Zvidzidzo zvinoratidza izvozvo humbowo hwemagariro hunoshanda yekunyengetedza vanhu kuti vatore danho raunoda. Humbowo hwehukama hunouya nenzira yemalogo emhando dzawakashanda nawo, zvipupuriro kubva kune vatengi vekare, ongororo yechigadzirwa chako, kana kusimbiswa kwekuti vamwe vatenga sevhisi yako. Mukukosha, vanhu vanoda kuziva kuti vamwe vakashandisa uye vakabatsirwa nemhinduro yako, futi. Nekusanganisira humbowo hwemagariro pane peji rako rekumhara, uri kusimbisa chako kupa pasina kana kutaura chero chinhu.
Kubata pane yega yega mapoinzi kuchakupa kopi yakatenderedzwa inopindura mibvunzo yako yese yevaenzi… izvo zvinondiunza kune yangu inotevera poindi.
2. Kutanga kupindura kupokana.
Chikamu chakakosha chekunyora chinonyengetedza kopi (kopi inoita kuti vanhu vashandure) iri kubvisa kupokana vasati vatombouya. Zvino, izvi zvinotora hunyanzvi… kana rumwe rubatsiro kubva kushamwari.
Paunenge iwe waisa hwaro hwako nekutaura ese akakosha mapoinzi, zviise iwe mupfungwa yetariro yako uye funga nezvekwavanogona kuratidzira kana kukupikisa sezvavanenge vachiverenga. Semuenzaniso, kana iwe ukati "Takabatsira makambani eFortune 500 kuunza vatengi," muverengi wako anogona kuseka kana kusahadzika nazvo kunze kwekunge iwe watevera chirevo icho nehukama hwehukama.
Ita chiitiko ichi chega chega chikamu chepeji rako (kana kubvunza shamwari isina rusarura kuti ubatsire) kudzamara wavhara zvese zvinopesana zvaunogona kufunga nezvazvo. Paunowana mibvunzo kubva kune vanhu vakashanyira peji rako rekumhara, shandisa izvo semhinduro kuti uwedzere kopi yako zvakanyanya. Zvirinani, tsvaga kutsoropodza kunovaka kubva kune ako ekutanga mashoma anotendeuka anotungamira kuti uve nechokwadi chekuti yako yekumhara peji iri kusangana nezvose zvaunoda.
3. Vaka kuvimba netariro yako.
Iti waive uchiverenga peji rekutengesa uye kambani yakanyora, "Chigadzirwa chedu chakabatsira vanhu zana uye chingakushandira iwe, futi!" Meh. Ini ndingangopfuura uye ndotsvaga kambani ine mhinduro inogona kunyatsondishandira. Chinangwa chako ndechekuvaka kuvimba nemushanyi wako uye nzira yekuita izvozvo ndeyekuuya sechiremera.
Kunze kwekushandisa humbowo hwemagariro, dzimwe nzira dzekuvaka kuvimba ndedze:
Nyora munzira yaunotaura uye kugadzirisa ako tarisiro sezvaungaita mutengi mupenyu.
Taura nhamba dzinotsigira meseji yako.
Shandisa nyaya dzinoongorora dzinojekesa vatengi zvakafanana nechinangwa chako.
Be relatable. Ratidza vateereri vako kuti iwe uri munhu nekubvuma kutadza, kuvhura nezve kusahadzika kwawakave nako, uye kuva akatendeseka. Iyo bakoat ndeye iwe unofanirwa chete kugovera izvo zvinoenderana nekurwa kwavo; usangoburitsa chero chinhu.
4. Shandisa zvinokonzeresa kubaya.
Dzvanya zvinokonzeresa zvakagadzirirwa kubvisa iyo yekupedzisira yekusahadzika mushanyi asati atendeuka. Unogona kufunga nezvavo sekunanzva Probability Enhancers (… ehe, ndakagadzira iro izwi). Iwo akanyanya kukopa akaiswa padyo neCTA yako iyo inosundira tarisiro yako pamusoro pemucheto nekurerutsa pfungwa dzavo uye kudzikisira njodzi yekutendeuka.
Pazasi pane dzimwe nzira dzinoshanda dzekushandisa dzvanya zvinokonzeresa:
Zviri nyore kuzvinyoresa
Quote kubva kune yakabudirira kana inofara mutengi
Blurb pane "zvaunotarisira"
Imwe nzira yekugadzira
Chero chaunosarudza, tinya zvinokonzeresa zvinopa shanduko dzako kukurudzira kwavanoda.
A / B Kuedza Yako Inosvika Peji
Zvese zvatakakurukura kusvikira pano zvanaka ... mukufungidzira. Asi bhizinesi rako rakasiyana nemamwe, uye chako chinangwa vateereri chakasiyana. Unoziva sei kuti iyo kopi yawakasarudza iri kushanda? Kana kana yako CTA kuiswa kuri kurudyi? Kana kuti ndeapi mavara anoita zvakanyanya? Kana kuti ndeupi mufananidzo waunosarudza?
Unoidza iwe. Ndozvinoita. Kupatsanura kuyedzwa (kana kuongorora kweA / B) pamwe hachisi chinhu chitsva kwauri semushambadzi, uye kupatsanura kuyedza peji rako rekumhara ingori imwezve muyedzo yekuwedzera kune yako runyorwa.
Ngatimboti fambei pamusoro penzira yekunyatsoita A / B kuyedza mapeji ako ekumhara.
Chii chinonzi A / B kuyedza?
Kuongorora kweA / B kuri kungopatsanura traffic yako kune maviri (kana kupfuura) misiyano yepeji kuti uone kuti chii chinoita zvirinani. Nepo iwe uchigona kuita izvi nemaoko nekutanga musiyano mumwe kwenguva yakati, uyezve imwe yenguva yakafanana yenguva, zvinonyanya kushanda kushandisa Software iyo inokutendera iwe kupatsanura bvunzo uye inokwanisa kuteedzera zvawabuda.
Izvo zvikamu zvikuru zveyedzo yeA / B ndizvo vari vari, kana mavhezheni maviri epeji, iyo shasha, kana peji rekutanga, uye iyo munhu anopikisa, kana iyo peji iwe yawakagadzirisa kuti uedze kupesana neyekutanga.
Maitiro eA / B Bvunzo
Icho chinonyanya kukosha kupatsanura kuyedza kugadzira tudiki tudiki neimwe bvunzo. Semuenzaniso, haudi kupatsanura bvunzo musoro wako uye mufananidzo wako panguva imwe chete nekuti hauzozive kuti ndechipi chinhu chakawana mhedzisiro. Neichi chikonzero, namatira kuyedza chinhu chimwe panguva. Iye "anokunda" anova shasha yako, ipapo unogona kugadzira mutsva anopokana kuti aedze chinotevera chinhu. Iwe unodzokorora kutenderera uku kusvika iwe wasvika padanho rekushandurwa raunofara naro (uye iro rinowira mukati mechokwadi zvinotarisirwa, zvatichafukidza pazasi).
Chii chaunofanira kuyedza?
Unogona kuyedza chero chinhu pane peji rako rekumhara. Asi kunyangwe zvichikwanisika, iwe ungangoda kudzikisira bvunzo yako kune mashoma ezvinokanganisa peji rako, se:
Kopa pane peji
Tungamira fomu kureba neminda
Iyi bvunzo ichave neyakanyanya kukanganisa maitiro ako ekushandurwa. Edza kutanga neshanduro yakapusa kutanga, semusoro wenyaya kana ruvara rweCTA, wozoshanda nzira yako kuenda kuzviitwa zvakakura, sekopi kopi rako reji.
Kumhara Peji Metric Kutevera
Metric inokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuti rako rekumhara peji riri kuita sei uye nekukupa iwe imwe nzwisiso yekuti ungavandudza sei. Zvakaoma kuziva chaizvo izvo zvinoshanda kana iwe uchivhura peji. Pima uye uteedzere zvine hungwaru pakutanga kusvikira wasvika padanho rakanaka rekushandura, ipapo unogona kuteedzera metriki yako zvishoma nezvishoma.
Kangani kushanya kwauri kuwana pane yako yekumhara peji? Iyo inowedzera kushanya, iwe paunowedzera iwe mukana wako wekushandurwa. Edza kugadzirisa yako yakabhadharwa zano kana kutsanangudza ako akakosha kutyaira yakawanda traffic kune yako peji. Iwe unogona zvakare kurega vateveri vako varipo vazive nezve chako kupihwa kuburikidza neemail, social media, uye pane webhusaiti yako.
Kuziva kunouya traffic yako kunozokuzivisa iwe kwaunofanirwa kupetera pasi kana kudzika kuedza kwako.
Iyi ndiyo nhamba yevanhu vanozadza fomu rako rekutungamira uye ivhu pane rako rekutenda peji. Kune akawanda ma tweaks aunogona kugadzira kune rako peji kuti uwedzere iyi nhamba, asi ita shuwa kune A / B bvunzo kuti uzive zviri kushanda.
Vatengi vanongedzera kuhuwandu hwevatungamiriri iwe hwawakagadzira kubva kune yako fomu. Chikonzero ichi chakasiyana nekutumira ndechekuti zvakapetwa zvinofambidzana zvinongoverengerwa kamwe chete, zvichireva kuti kana iyezvino lead inotungamira ichizadza fomu rako kuti uwane chako kupihwa, hazvikanganise kuverenga.
Izvi zvimwe zvekucherechedzwa kwemabatiro anoita vanhu nepeji rako kupesana nemetric. Mepu yekupisa inogona kukuratidza panopuruzira vanhu, izvo zvavanoverenga, uye maitiro avanoita nepeji rako. Iyi yese data inobatsira kana uchifunga nezve yako peji dhizaini uye chimiro.
Kana vashanyi vari kuuya kune peji rako uye nekukurumidza vachisiya, saka unofanirwa kuongorora kuti izvo zvirimo zvinoenderana nechipo. Iko kopi yako inobata kutarisisa kwevashanyi uye vashanyi vanongoerekana vaziva zvekuita kana vagara pane peji rako? Iri peji rako chiratidzo chekopi iwe yawaishandisa kuti vanhu vaishanyire?
Iyi metric inokuudza iwe kuti vangani vanhu vanotanga kuzadza fomu rako asi vasinga rizadze. Kana nhamba iyi yakanyanya kukwirira, zvimwe zvigadziriso zvekutarisa zviri kuunza nyowani zvinokonzeresa, kupfupisa fomu yako, kana kuita kuti zvinyatso kujekesa zvaunoda kuti mushanyi wako aite.
Iwe unofanirwa kutonga peji rako rekumhara uchipesana nemaitiro emabhizimusi uye nepamusoro pevateereri vakafanana kuti uzive kana iri kuita sezvaitarisirwa. Tarisa uone zvimwe indasitiri mabhenji kumisikidza seyako yekutanga, asi usaore moyo nezvakabuda neimwe kambani.
Hazvina mhosva kuti chii chiri kuitika, zvinokwanisika Ongorora uye uporese mapeji ako ekumhara kana iwe ukaterera kune metric.
Maitiro Eko Kuita Yako Kumhara Mapeji Kuti Abudirire
Kune nguva dzose tweaks iwe aunogona kuita yekumhara kumhara peji kuita. Pazasi pane mashoma matipi makuru (kana ndikadaro ini pachangu) kuti mapeji ako ekumhara aenzaniswe.
Gadzirira peji rako rekumhara.
Kugadziridza ishoko rakavhiringidza kudaro, handizvo here? Ndiri kureva, tiri kutaura nezvemifananidzo, kuteedzera, mazwi akakosha, kana UI? Mhinduro ndeyekuti - tiri kutaura nezvazvo zvese. Kugadziridza zvinongoreva kuita kuti peji rako rekumhara rive rakanyanya kunaka, uye izvo zvinogona kusanganisira zviuru zvezvakachinjwa. Kana iwe uchida kuziva zvese zvaungaite kugadzirisa peji rako rekumhara, iwe uchazoda yakanaka yakawedzera gwara. Uye, fungidzira chii, isu tine imwe pano.
Ipa chipo chakanaka.
Iwe unogona kutaura kuti chero chemahara chinokodzera se "chakanaka," asi icho hachisi chokwadi chaicho. Kwete chako chete chinofanira kunge chiri chemahara (isu hatisi kutaura zvekutengesa mapeji pano) asi zvakare zvinofanirwa kuve zvakanaka zvakakwana kupa mutorwa kukupa ruzivo rwavo. Ngatizvitarisei izvi - kune akawanda makambani ari kukwikwidza vateereri vako, vachikumbira ruzivo rwavo nekuvakumbira kuburikidza neemail. Saka, chii chichaita kuti iwe umire kunze kwepakeji? Chipo chinoshamisa, ndizvo.
Heano mashoma mibvunzo kuti uone kana iwe uine chinomanikidza kupihwa kana kwete:
Chipo changu chinogadzirisa poindi yekurwadziwa kune vandinovavarira?
Iko kune bhenefiti yakajeka iyo inotungamira inogona kuwana kubva kune ichi kupihwa?
Anogona wangu mupi kukwikwidza kukwikwidza?
Deredza nguva yekutakura peji.
Yechipiri kunonoka mu peji rekutakura nguva zvinoreva 7% kushoma kushoma uye 11% mashoma maonero peji. Inononoka peji mutoro nguva inogona zvakare kukonzera kusagutsikana kwevatengi uye kushungurudzika.
Pasina mubvunzo kutaura, kumhara peji mutoro nguva ndiyo metric yekutora zvakanyanya. Kana iwe uchida mamwe matipi, tarisa izvi sosi pane iri kudzikira peji mutoro nguva.
Chengeta rwendo rwemutengi mupfungwa.
Sezvo iwe uri kutyaira traffic kune yako kumhara peji, iwe unofanirwa kuve neruzivo rwakajeka rwekuti vashanyi vako varipi murwendo rwevatengi vavo. Izvi zvinoreva kuti iwe uchazoziva kana ivo vari kuyedza kuongorora dambudziko (kuziva), kutsvaga mhinduro yedambudziko ravo (kufunga), kana vakagadzirira kuvhara (sarudzo). Kopi yako nechipo zvinofanirwa kuratidza izvi kana iwe uchida kushandura. Hazvina kusiyana kubva kune chero zvimwe zvekushambadzira zvinhu - sangana nevaenzi vako kwavari.
Gadzira chiitiko chisina musono.
Hapana munhu anofanirwa kushamisika pavanosvika pane yako peji yekumhara. Inofanira kunge iri seyakashambadzirwa, zvichireva kuti inowirirana nekopi yako. Shandisa iwo mamwe mazwi pane rako rekumhara peji rawaimboshandisa kuti vanhu vasvike ipapo, kunyangwe yaive yakabhadharwa kushambadzira, yemagariro post, blog CTA, kana email. Iwe unofanirwa kunzvenga chirauro uye chinja pane zvese zvinodhura kana iwe uchida kuti vanhu vanamatire vakatenderedza.
Gadzira nzira yakajeka yekutendeuka.
Panofanirwa kuve pasina zvekufungidzira zvinobatanidzwa mukufambisa peji rako rekumhara. Kana mumwe munhu achinge asvika pane rako peji, zvinofanirwa kuve pachena zvaunoda kuti vaite - tumira yavo info kune yako inotungamira fomu. Chinangwa chako ndechekutungamira vashanyi kune yako fomu vachishandisa kugadzira mirayiridzo cues.
Hedzino dzimwe nzira dzekunongedzera mushanyi wako kushanduko:
Sarudza mufananidzo wemunhu anga akatarisa munzira kana kunongedzera fomu rako
Gadzira yako CTA iri rakapesana ruvara kukwevera kutarisa kwariri
Shandisa miseve inonongedza kune yako inotungamira fomu
Pinza anchor chinyorwa chinounza vanhu vadzokere mufomu pavanodzvanywa
Ipa CTA yako imwe Nzvimbo isina kunaka papeji
Gadzira yako inotungamira fomu ine yakajeka chivara kana pepa
Wedzera kushomeka kune chako kupa.
Mashoma maitiro ekutengesa emweya anoshanda pamwe nekutya… uye kutya kurasikirwa (zvinonyanya kuzivikanwa seFOMO). Vatengi havadi kurasikirwa nekwaniso yavo yekusarudza, uye kana iwe ukajekesa kuti chako chinopa chiri kudiwa zvakanyanya uye / kana kushomeka, ivo vanozokwira kuti vatore. (Heino kudzidza kunotonhorera pamidziyo yekuki kana iwe uchida kutsvaga pane psychology yekushomeka kushambadzira.)
Chimwe chikonzero nei nzira iyi ichishanda nekuti vanhu vanoda zvinhu zvakaoma kuwana - izvo zvinoratidza kukosha uye kusarudzika.
Kuti uratidze kushomeka, taura kuti zvishoma zvipi zvaunopihwa zvasara, sanganisira kuverenga nguva, shandisa mazwi akaita sekuti "zvinopera munguva pfupi" kana "mukana wekupedzisira". Zviripachena, isu tinoda kuti iwe uve wechokwadi, saka chete shandisa maitiro ari echokwadi kune rako bhizinesi. Pazasi mutsara: pane nzira dzakawanda kushandisa uye kubatsirwa neiyi nzira.
Vhidhiyo kushambadzira iri kuramba ichiwedzera kufarirwa nechikonzero chakanaka. Kwete chete ita vatengi vanosarudza kuona vhidhiyo kubva kumakambani, asi 88% yevatengesi vevhidhiyo taura kuti vhidhiyo inovapa yakanaka ROI. Chinokosha kugadzira iyo inoshanda vhidhiyo izvo hazvivhiringidze vashanyi kubva kuchinangwa chako chekupedzisira: iko kudaidzwa-kune-kuita.
Kana iwe uri paruzhowa nezve kushandisa vhidhiyo, hezvino zvimwe zvikonzero zvinogona kukusundira iwe pamusoro pechirevo.
Inowedzera huwandu hwekushandurwa
Ndiyo imwe nzira yemunhu yekugovana meseji uye kubatana netarisiro
Unogona kuve unonyanya kuita kupfuura chifananidzo uye unowana vashanyi mutsika yekudzvanya (uye kushandura)
vanogona dzikisa huwandu yemafoni ekutsigira kana matikiti aunogamuchira
Inogadziriswa 60,000 nguva inokurumidza kupfuura zvinyorwa
Kana iwe uchironga kushandisa zano iri, VidYard ine zvimwe zvinobatsira kumhara peji vhidhiyo nhungamiro kutevera.
Iwe unofara zvakadaro nezvenzira dzese dzaunokwanisa kusimudzira mapeji ako ekumhara? Chokwadi, pane akati wandei asi izvo zvinongoreva kuti peji rekumhara-risingasviki peji haifanire kugara yakadaro. Tora iyo imwe nzira panguva uye uvake sezvazvinodiwa.
Chii Chaunofanira Kuita Post-Shanduko: Tungamira Kurera
Nekudaro, iwe une yakagadziriswa peji yekumhara iyo inoshanduka senge chishongo. Zvino chii? Iwe hausi kuda kusiya iwo anotungamira akarembera. Pane kudaro, iwe unoda kuvachengeta kuti vave vatengi, wobva wavachengeta ivo vamwezve. Heano maitiro.
Gadzirira peji rako rekutenda.
Ndinovimba hauna kuneta nekugadzirisa zvakadaro. Yako peji rekutenda ndicho chinhu chekutanga munhu anoona mushure mekutendeuka, saka zvinoshanda senge hombe mukana wekufadza mutungamiri wako mutsva kutodarika zvauinazvo kare. Chinangwa chako chakapetwa kaviri: isa chako chawakavimbisa uye uite kuti vafarire chimwe chinhu pane yako saiti.
Rako peji rekutenda rinofanira:
Ndatenda mutungamiri wako mutsva (enda mufananidzo)
Ipa zvinongedzo kune zvakakodzera zvemukati pane yako saiti
Koka mutungamiri wako kuti akutevere pasocial media
Kumbira mutungamiri wako kunyorera kune yako blog
Shandura email yekutevera neye kupihwa
Vatungamire ivo parwendo rwevatengi.
Mutungamiri wako mutsva achaita nzira yavo kuenda padanho rekusarudza newe kana pasina iwe. Iwe unoda kuve iwe unovabatsira kusvika ipapo. Iwe waunganidza rumwe ruzivo rwakakosha nezve yako lead, zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira zvavanoda zvinotevera. Govera zvirimo kana zviwanikwa kuti uzviunze kune chinhanho chinotevera cherwendo rwavo, uye iwe unogona kungova yavo sarudzo yedanho rekusarudza. Mushure mezvose, tinoziva kuti tarisiro inotenga kubva kumakambani aanoziva, senge, uye kuvimba.
Kana mumwe munhu akasaina kuti agamuchire ruzivo kubva kwauri, vanova vanogona kuve mutengi waunofanira kushanda nesimba kuti uvake hukama nekubatana. Chinhu chakanaka iwe unotoziva zvavari kufarira uye kuti marwadzo avo ndeapi, kuti iwe ugone kuvanongedzera nekuwedzera, zvinobatsira zvemukati uye zvakasarudzika kushambadzira.
Kana iwe uchiri wakanamatira, tora imwe kurudziro kubva kune mamwe akanakisa kumhara mapeji atingawana.
Kura Zvirinani neLanding Mapeji
Mapeji anomhara anozopa ruzhinji rweyako mitsva inotungamira, saka ivo vanokumbira kutarisisa kwako. Iine huwandu hwakawanda hwetweaks, zvinowedzerwa, uye misiyano iwe yaunogona kuitisa, hapana chikonzero nei iwe usingakwanise kuve neinomhara peji inoshanduka mushe.
Chero bedzi iwe uchitevera akanakisa maitiro isu takavhara pamusoro, iwe unenge uri munzira yako kuenda kune yepamusoro-inoita kumhara peji… uye kana iwe uchida imwe yekuwedzera nhungamiro isu tinogara tiri pano sechiwanikwa.
13 Rakareruka (Asi Rakakosha) Matipi Ekugadzira Zvirinani Kumhara Mapeji
Maitiro Ekugadzira Peji Yekutambanudza: Iyo yakapusa Matanho-ne-nhanho Gwara
Iyo 11 Yakanyanya ClickFunnels Dzimwe nzira & Vanokwikwidza muna 2020
Maitiro Ekugadzira Squeeze Mapeji Anogadzira Matani Ekutungamira
I 7 Best Leadpages Dzimwe nzira muna 2020
PageRank kuveza: Maitiro ekuwana zvakawanda kubva kune ako maratidziro